नेप्सेमा ७ अंकको वृद्धि - Aarthiknews
नेप्सेमा ७ अंकको वृद्धि
काठमाडौं । साताको दोेस्रो दिन सोमबार नेपाल स्कट एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक ७.२३ अंकले बढेर १२२२.०६ बिन्दूमा पुगेको छ । कुल १७५ कम्पनीको १४ लाख ७७ हजार कित्ता शेयर ३८ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
कारोबार शुरु भएको केही समयपछि उकालो लागेर दोहोरो अंकको वृद्धिमा पुगेको भए पनि नेप्से परिसूचक पछि क्रमिक रुपमा ओरालो लागेको थियो । सोमबार कारोबार रकमका आधारमा सिद्धार्थ बैंकको संस्थापक शेयरको कारोबार उच्च भएकाले सो कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ । यसको बैंकको २ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै सोमबारको कारोबारबाट सबैभन्दा बढी कमाउनेमा नाडेप लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ता रहेका छन् । यस कम्पनीको शेयर मूल्य ७. ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उता, सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा सानिमा इक्विटी फन्डका लगानीकर्ता रहेका छन् । सो फन्डको इकाई मूल्य ३.५७ प्रतिशतले घटेको छ ।
सोमबार कारोबारमा आएका समूहमध्ये. निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ ।